यो नेपाल टेम्पो होः अब सुन्नुहोस् टेम्पोको कथा - Everest Talk
यो नेपाल टेम्पो होः अब सुन्नुहोस् टेम्पोको कथा1 min read
२०७६, १३ आश्विन सोमबार १७:२९
अफिसमा सम्पादकको जहिलेकै किचकिच, कहिले यो भएन त कहिले त्यो भएन । (यो कुरा बुझ्नू कि ठूला मान्छेहरू सानाबाट कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्, यदि कोही हुन्छन् भने तिनीहरू ठूला हैनन् ।)
कहिलेकहीँ दिक्क लाग्छ, अनि निक्लिन्छु कतै बरालिन । बानेश्वरसम्म हिंडदै पुग्छु ।
यदि तपाईँ टेम्पोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी परिचयपत्र नदेखाउनु होला । अझ कुनै पनि परिचयपत्र नदेखाउनुहोला । परिचयपत्रमा ठूला मान्छेको हस्ताक्षर हुन्छ, ट्याम्पो सानो हुन्छ । सानो ट्याम्पोले ठूला मान्छे हस्ताक्षरहरू नचिन्न सक्छ ।
मलाई त बस् बरालिनुछ । ट्याम्पोको पछाडि सीटमा बसेर तपाईँ बरालिन सक्नुहुन्न । सीट साँघुरो हुन्छ, मान्छे चढ्ने र ओर्लने क्रम निरन्तर हुन्छ । मान्छेको ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा तपाईँको बरालिन उन्मुख ध्यान भट्किन सक्छ । बरु बरालिन हिँड्नेका लागि अगाडि, ड्राइभरसँगैको सीट गज्जब हुन्छ । ड्राइभर तपाईँझैँ बरालिन निक्लेको पनि हुन्न । ऊ आफैँ आफ्नै कर्ममा लिप्छ हुन्छ ।
‘‘अगाडि बस्न मिल्छ ?’’ म ट्याम्पोको झ्यालबाट आफ्नो मुख छिराउन खोज्दै सोध्छु ।
‘‘काँ जाने ?’’ ट्याम्पो होइन कि चालकले सोध्छ ।
‘‘यीँ ओर्लने हो ।’’
ऊ मलाई कुनै अनौठो वस्तु देखेजसरी हेर्छ । मानौँ म कुनै अर्कै संसारबाट यो पृथ्वी नामक धर्तिमा टुप्लुक्किएको अचम्मको जनावर हुँ ।
यदि तपाईँ सामान्य मानिसको सोचाइविपरितको हर्कत देखाउनुहुन्छ भने पागल बन्नुहुन्छ, विचार गर्नु । पहिलोपटक पृथ्वीलाई सूर्यले होइन कि सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ भन्ने महामानव, महावैज्ञानिक ग्यालिलियो पनि महापागल बनाइएका थिए ।
तपाईँ समाजमा चलिएका भन्दा फरक वा कुनै नयाँ कुराको योजना लिएर केही अर्कै गर्दैहुनुहुन्छ भने पहिले आफूमा पागल हुने ल्याकत राख्नुपर्नेहुन्छ । यदि तपाईँ पागल बन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँबाट नयाँ केहीको अपेक्षा गर्नेहरू महापागल हुन ।
‘‘हुन्न ।’’ चालक अर्का्तिर फर्कन्छ ।
मेरो कुरा सुनेर ट्यम्पोको पछाडि बसेका दुई युवतीमध्ये एक अर्गा्निक सुन्दरी र अर्की क्रिम सुन्दरी मलाई प्रेमभन्दा पनि दयाको भावले हेर्दैछन् भन्ने भाव पर्छ । यो बुझ्नुहोस् कि यदि तपाईँलाई कसैले ‘विचरा वा कठैबरा’ भन्छ वा त्यो नजरले हेर्छ भने त्यो सिर्फ दया हो । पागललाई कसैले मन दिँदैन । माया दिँदैन । प्रेममा पागल भएँ भन्नेहरू पागल होइनन् । पागलले आफूलाई कहिले पनि पागल भन्दैन ।
‘‘ह्या दाइ पनि, उसै बरालिन हिँड्या के । भरे यीँ आएर ओर्लिन्छु भन्या ।’’ नमिलेका दाँतहरू ले उसलाई मोहित बनाउने विचारमा बोल्छु ।
ऊ अन्कनाउँदै ढोका खोल्छ । पछाडिका दुई सुन्दरीहरू अब के गर्दैछन् मलाई थाहा छैन । कारण उनीहरू मेरा आँखाअघि छैनन्, ढाडअगाडि छन् । अँ .. ढाडको पछाडि भनेको भुँडी हो, ढाडको अगाडि युवतीको केशमा बच्चा रहनसक्छ, नौ महिनासम्मको, अरु कोही रहनै सक्दैन पेटसिवाय ।
ढाडअछाडि भएकाहरू शरीरको नजिक भएरै पनि आँखाबाट बहुत टाढा हुन्छन् । फेरि तपाईँलाई अक्सर खतरा ढाडपछि रहनेबाटै हुन्छ । सजग रहनुहोला । टाउकोको पछाडिपट्टि सिसिटिभी राख्ने सोच बनाउनुभएको छ भनेचाहिँ फेरि तपाईँ पागल हो ।
टेम्पो सानो हुन्छ । सानो कुरालाई भरिन पनि सानो समय काफी हुन्छ । मान्छेमा पनि यो नियक लागू हुन्छ । सानो मान्छे सानो तलब, सानो सफलतालगायतले नै खुसी हुन्छ । योजना, चाहना, आसाहरू पनि साना नै हुन्छन् । तर यो विचार कस्तो हुन्छ, मलाई थाहा छैन ।
टेम्पो अघि बढ्छ । ए हैन, चालकले बढाउँछ । पछाडिबाट ट्राफिक दिदीले इसारा गर्दै म बसेको टेम्पोलाई लखेट्दै पो रछिन् । टेम्पो चालकको हैसियत सायद समाजलाई सानो हुन्छ, खेदाउने भनेकै सानालाई ठूलाले हो ।
‘‘त्यो ट्रफिक्नी दिदीले किन त्याँबाट खेदाको ?’’ म सोध्छु ।
‘‘त्याँ मान्छे चढाउन पाउँदैन नि त !’’
म मुन्टो हल्लाउँछु । सबै ठूला मान्छेहरूले साना मान्छेलाई सानो बनाइरहेका नहुँदारहेछन् । कतिले व्यवहारमा ठूला बनाइरहेका पनि त हुँदा रहेछन् । त्यस्तै कति ठूलाले सानालाई सिकाइमा ठूला बनाइरहेका हुन्छन् त कति बुझाइमा । आखिर आफ्नो बडापन नै दिएर वा सम्पति नै दिएर त कसले पो अरुलाई ठूलो बनाउनसक्छ र ?
मैले मेरो बुबालाई सम्झेँ, आमालाई सम्झेँ, शिक्षकलाई सम्झेँ र सधैँ किचकिच गरिरहने सम्पादकलाई सम्झेँ । आखिर सबैले आफू आफ्नै किसिमले ठूलो भइरहेर पनि अरुलाई नि अरु नै किसिमको ठूलो बनाइरहेका हुँदारहेछन् ।
‘‘सरकारी खाकीवालाले कत्तिको दुःख दिन्छन् हाओ दाइ !’’ मैले चालकसँग कुराकनीको ढोका खोलेँ ।
‘‘नियम मान्दा त दिन्नन् ।’’ चालकले भने, ‘‘तर कहिलेकहीँ चाहिँ कस्को र कस्तो सवारी भनेर रोक्छन् । तर उनीहरूको पनि जागिर त हो, गर्नैपर्या छ विचराहरूले ।’’
वाह ! कस्तो उच्च बुझाइ ?
टेम्पो बिजुली बजारको सीमाना काटेर अनामनगर टेक्छ र नटेक्दै रोकिन्छ । कोही महिला सानो बच्चा बोकेर टेम्पो चढ्ने कसरतमा लाग्छिन् । मेरै छेऊमा बसेको चालक कराउँछ, ‘‘छिटो चढ्नु न, अहिले देख्यो भने मार्छ ।’’
यति आफ्नो गल्ती थाहा भएरै पनि सुधार्न सक्नुहुन्न भने कहिल्यै ठूलो बन्नुहुन्न । सधैँ सानोको सानै रहिरहनुहुनेछ । यो कुरा बुझ्नुहोस् र उही चालकको झैँ जानेको कुरामा पनि गल्ती नगर्नुहोस् ।
‘‘दाइको घर काँ ?’’ टेम्पोले अनामनगरलाई बेनाम बनाइसकेको छ ।
‘‘धरान !’’ चालक भन्छन्, ‘‘प्लाजा झर्ने छ ?’’
अघिका ती दुई सुन्दरीमध्ये क्रिम सुन्दरी ओर्लिन्छन् । उनी गल्ती गछिन्, भन्छिन्, ‘‘कार्ड छ ।’’
मैले अघि पनि भनेँ, तपाईँ यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् । टेम्पोले ठूला मान्छेको हस्ताक्षर चिन्दैन ।
टेम्पो अघि बढ्छ, म पनि ।
‘‘तपाईँको घर चीँ ?’’ मभन्दा पनि पुलुक्क हेरेर चालक अघि बढ्छन् ।
‘‘पूर्वै हो ।’’ म भन्छु, ‘‘तपाईँको नाम ?’’
म मेरो सोनुलाई सम्झन्छु । प्रेमिका सम्झँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बेकुफ बन्दै हुनुहुन्छ । मैले सोनु निगमको कुरा गरेको । कोही कलाकार किन आफ्नै लाग्छन ? मलाई थाहा छैन ।
मभित्रको पत्रकारिता जागिसकेको हुन्छ सायद । तपाईँ जतिसुकै आफूलाई लुकाउन खोज्नूस्, आखिरी त्यो लुकाउन खोजेको तपाईँ बाहिर आएरै छोड्छ ।
‘‘गाडी साहुको कि आफ्नै ?’’
‘‘साहुको हो ।’
‘‘मासिक कति बुझाउनुपर्छ ?’’
‘‘दिनको २८ सौ ।’’
‘‘त्योभन्दा बढी आफ्नो ?’’
‘‘हैन । महिनावारी तलब । टिप्स् निकाल्न सके आफ्नो ।’’
‘‘काठमाडौँमा जीवन मज्जाले चल्छ ?’’
‘‘मज्जाले त काँ ? खानाबस्न र भाडा तिर्न पुग्छ ।’’
‘‘बिहे गर्नुभो ?’’
‘‘दुइटा छन् । छोरी ।’’
‘‘एउटा पढ्छे, बोर्डिङ् । अर्की सानै छ ।’’
मनमनै सम्झन्छु कि टेम्पोको कमाइले पनि नानीलाई प्राइभेट स्कूलमा पढाउने ल्याकत राख्छ भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो नराम्रो कमाइ कसरी हुनसक्छ । आफूलाई पत्रकारीताको कमाइले यो सहरमा बाँच्नमात्र पनि धौधौ परिरहेको बेला ।
‘‘ए.. कमाइ राम्रै हुँदोरहेछ । अझ आफ्नै टेम्पो हुँदा त गज्जब नै हुने रै’छ क्यारे !’’
‘‘आफ्नो किनेर फाइदा छैन ।’’
‘‘किन ? पैसा ?’’
‘‘पैसा हुँदै पनि फाइदा छैन हो सर । ब्याट्री नौ नौ महिनामा फेर्नुपर्छ । नचलाई राख्दा आफैँ साफ । फेरि काठमाडौँको सडक । देशको अवस्था नै पनि हेर्नु न !’’
उफ्‘.. देशको बारेमा कुन चाहिँ ठूलाले हामी सानाहरूको बारेमा यति नराम्रो धारणा भर्दियो हँ ? यदि देशमा टेम्पो चलाउँदा फाइदा हुँदैन भने ठूलाहरूले किन सानालाई आफ्नो धनको खर्च गरेर चलाउन दिन्छन् ? यसलाई तपाईँ ठूलाहरूको सानालाई सानै बनाइरहने साजिसको रुपमा पनि ब्याख्या गर्न पाउनुहुन्छ, मेरो बिचारमा ्र
अँ ‘ हामी केही गर्दै नगरी भन्दिन्छौँ, ‘‘यो देशमा केही हुन्न ।’’
तर यो सोच्दैनौं, ‘‘किन हुन्न ?’’
अब मलाई मेरा सम्पादकप्रति माया पलाएर आउँछ । नझुक्किनुहोला, दया होइन । अनि उनले पनि मलाई कामप्रति त्यतिका गाली गरेर घृणा देखाइरहेका थिएनन् । यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई माया गर्नेहरुले मात्र गाली गर्न सक्छन् । यदि कोही सिर्फ माया गर्छु भन्छ भने त्यो दयाको दायराभित्रै खुम्चिएको विचार हो । भावना हो ।
अँ ‘ म भन्दै पो थिएँ । हाम्रो देशमा अवसरहरु जति पनि छन्, बस् उत्खनन् हुन जरुरी छ । फेरि त्यो उत्खनन् कोही विदेशी आएर गर्दिने पनि त हैन नि ?
प्रयास नै नगरी देशको अवस्थालाई सराप्ने संस्कारको खेती खुब फस्टाएको छ हाम्रो देशमा । आखिर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छन् कि यो भूमि लगानीको लागि भर्जिन छ । अब म यो भन्छु कि यदि नागरिकले वा अझ भनौँ युवाले संघर्षको ल्याकत राख्ने हो भने नेपाल अवसरको भर्जिन भूमि अवश्य हो ।
यो मेरो कुरालाई तपाईँ नमान्न पाउनुहुन्छ तर एउटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो के भने पहिले आफू प्रयास गर्नुहोस्, अरुले भनेको भरमा खालि देश र सिस्टमलाई मात्र दोष नलगाउनुहोस् । देश सरकारले बनाउने अवश्य हो, म मान्छु । अब तपाईँ पनि यो मान्नुहोस् कि सिस्टम हामीले बनाउने हो । जनताले बनाउने हो । अँ ‘ यदि तपाईँ आफूलाई यही भूमिमा सक्षम देखाउने ल्याकत मात्र राख्न सक्नुहुन्छ भने देश तपाईँको हो । सिस्टम तपाईँको हो । र, सारा जनता तपाईँका हुन् ।
अन्तिममा म कसैले भनेको कुरा सम्झन चाहान्छु, ‘पहिले आफूलाई प्रमाणित नै नगरी कुनै पनि ठाउँमा अवसरहरु प्राप्त हुँदैनन् ।’’
Tags: कृष्ण ढुङ्गेलटेम्पोको कथानेपाल टेम्पोयो नेपाल टेम्पो होः अब सुन्नुहोस् टेम्पोको कथासम्पादक
ट्राफिक नियम तोड्नुभएको छ ? अब ट्राफिकको फोन तपाईंलाई घरमै आउनेछ
२०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार १५:०१
जाने हो … ? … गौशाला…. चावेल, चावेल….. बसपार्क, कलंकी…….
२०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार १३:००
उनीहरू भन्छन्: जाम भएन भने खालि पेट सुत्नुपर्छ, जाम अझै भइदियोस्
२०७६, २८ माघ मंगलवार १४:०१
चालकको सपनामा सहचालक, भन्छन्- ठूलो हुने रहर छ
२०७६, २४ पुष बिहीबार १६:०४
हिरोका नयाँ एक्सपल्स २०० सार्वजनिक, आफ्नै नयाँ हेल्मेट ४ अप्सनमा सिट कभर
पोर्न साइट चलाएको अभियोगमा गोंगबुबाट एक युवक पक्राउ
नेपालमा भारतीय समाचारका सबै च्यानल बन्द
फेरी खुले भारतीय समाचार च्यानल
उद्यमशीलता विशेष: कागजको पेन्सिलबाट कोठामै लाखौँको आम्दानी
२०७७, २९ असार सोमबार १८:१५
सधै तस्बिरमा मात्र मुस्कुराउने ?
२०७७, २९ असार सोमबार १७:०३
२०७७, २९ असार सोमबार १२:०४
२०७७, २९ असार सोमबार ११:१८
अन्ततः ट्रम्पले लगाए मास्क
२०७७, २८ असार आईतवार ०८:१८